IHomo erectus: izici, imvelaphi, ukuziphendukela kwemvelo nezici | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Homo erectus ekugcineni
Siyazi ukuthi umuntu udlule ezinhlotsheni eziningi nasekuziphendukeleni kwemvelo kuze kube ngumuntu wamanje. Izinhlobo zethu zamanje, i- Homo sapiens, livela kolunye uhlobo. Enye yazo yi- Homo erectus ekugcineni. Homo erectus ekugcineni uyindoda endala eyayihlala ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba phakathi nengxenye yePleistocene. Isifanekiso esidala kunazo zonke satholakala eDemanisi, eGeorgia, futhi sifinyelela eminyakeni ecishe ibe yizigidi eziyi-1,8. Ukutholakala kokuqala kwalolu hlobo kwenzeka ngo-1891 esiqhingini sase-Asia iJava, manje esiyingxenye ye-Indonesia.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne- Homo erectus ekugcineni, izici zayo nomlando wayo.
1 Umsuka weHomo erectus
3 Izici ze-Homo erectus
Umsuka we- Homo erectus ekugcineni
Le ndoda yakudala ibikhona emhlabeni isikhathi eside. Kunemibono engqubuzanayo ngosuku lokuqothulwa kwalo. Ezinye izazi zesayensi yabantu zikholelwa ukuthi kwenzeka cishe eminyakeni engama-300.000 edlule, kanti abanye bathi kwenzeka eminyakeni engama-70.000 edlule. Lokhu sekuholele ekutheni abanye ochwepheshe bakholelwe ukuthi uhlala nabo homo sapiens, kodwa lesi akusona isikhundla esivame kakhulu namuhla.
Umsuka we- Homo erectus ekugcineni kubuye kube nempikiswano. Ngale ndlela, othile wayibeka e-Afrika, yize izazi zesayensi yabantu eziningi zingavumelani futhi zibiza isampula etholakala lapho I-Homo ergaster. Abasekeli balesi sikhundla bathi i- Homo erectus ekugcineni Ivela e-Asia.
Esinye sezici ezivelele kakhulu zale ndoda endala amandla ayo e-cranial, angcono kunalawo wezinhlobo zangaphambilini. Esinye sezizathu ezinkulu salolu shintsho kube wukutholakala kwendlela yokubhekana nemililo, okwaholela ekutheni kube nokudla okunempilo.
Homo erectus ekugcineni ungomunye wabokhokho baka I-Homo sapiens. Isigaba sokuziphendukela kwemvelo lapho i- Homo erectus ekugcineni kungesinye sezigaba ezingaziwa kakhulu, ngakho-ke imibono eminingana ehlukahlukene iyahlangana. Ngakho-ke, enye yazo isukela e-Afrika eminyakeni eyizigidi eziyi-1,8 edlule.
Kumele kuqashelwe ukuthi abanye ochwepheshe bakuqinisekisile ukuthi izinsalela ezitholakale ezwenikazi kwakungezenye yezinhlobo ezifanayo, i-Ergaster. Wonke umuntu uyavumelana neqiniso lokuthi ngokubonakala kwe-l Homo erectus, abantu bakudala baba onogada futhi bayishiya i-Afrika.
Ukutholwa kokuqala kwe- Homo erectus ekugcineni kwenzeka eMpumalanga Asia, kepha izinsalela zitholakele nase-Eurasia. Ezindaweni ezikude lapho kutholakala khona izidalwa, impumelelo yalolu hlobo ingaqinisekiswa ngokunembile. Lokhu kudala umehluko omncane kakhulu ngokomzimba nangokwesiko phakathi kwabo, ngoba kufanele bazivumelanise nezimo ezahlukahlukene zesifunda ngasinye. Isibonelo, isimo sezulu eYurophu sasibanda ngaleso sikhathi futhi ukube kwakungekhona ukutholakala komlilo, lokhu kungaba yinkinga enkulu.
Zonke izazi ziyavumelana ngohlobo lokuzulazula kwe- I-Homo erectus. Ubufakazi obutholakele bubonisa ukuthi bekungumuntu wokuqala ohlonishwayo ukushiya i-Afrika. Eminyakeni edlule, ifinyelele eNingizimu-mpumalanga ye-Asia.
Umbono odume kakhulu ukuthi ungasebenzisa ibhuloho leqhwa elakhiwe ngesikhathi seqhwa lolu hambo. Ukunwetshwa kwayo kubangele isabonakala ezingxenyeni ezithile ze-Indonesia, China, Europe noma Central Asia.
Njengazo zonke izinsalela zezinsalela, akulula ukuthola izici zomzimba nezokuphila. Ososayensi babheka imingcele ehlukahlukene ukulinganisa, ikakhulukazi ukuphakama noma ukuma kogebhezi. Isibonelo, amazinyo ahlinzeka ngemininingwane ebaluleke kakhulu mayelana nokudla neminye imikhuba ebalulekile.
Kulokhu, kufanele sengeze ubukhona bezinhlobo ezincane ezinezici ezahlukile. Kukhona, noma kunjalo, ezinye izici zefayela le- Homo erectus ekugcineni lokho kubonakala kwamukelwa kabanzi.
Izici ze- Homo erectus ekugcineni
Kuncane okwaziwayo ngesikhumba se- Homo erectus ekugcineni. Njengoba sazi sonke, inezindlala zomjuluko, kodwa ayizacile futhi ayijiyile. Ngokuya ngamathambo, ukwakheka kwesinqe se- Homo erectus ekugcineni kuyefana nokwabantu namuhla. Noma kunjalo, inkulu futhi inamandla. Okuthile okufanayo kwenzeke ku-femur, futhi njengoba kubonakala izinsalela eziningi, kwaba lula ukutadisha. Ngaphezu kobukhulu bayo obuphakeme, amamaki athile wokufakwa kwemisipha akhombisa ukuthi umzimba unamandla futhi unamandla.
El Homo erectus ekugcineni, njengoba igama liphakamisa, uhamba ngezinyawo ezimbili, ngokufanayo Homo sapiens. Ekuqaleni kwakucatshangwa ukuthi ubude besilinganiso besilisa babuncane kakhulu, cishe ngamamitha ayi-1,67. Noma kunjalo, izinsalela ezintsha zishintshe le ndlela yokucabanga. Manje kulinganiselwa ukuthi umuntu omdala angafinyelela kubude obungamamitha ayi-1,8, okude kakhulu kune-hominin yangaphambilini.
Isilevu se- Homo erectus ekugcineni Unamandla futhi, yize engenaso isilevu. Iqiniso lokuthi amazinyo mancane lidonse ukunakwa okuningi. Ama-paleontologists athole ukuthi njengoba umzimba ukhula, ubukhulu be-dentition buyancipha.
Ngokufanayo, imisipha yomhlathi kubonakala sengathi yehlile futhi umphimbo wancipha. Kungenzeka ukuthi ukutholakala komlilo nenyama ephekiwe ehlafunwayo kuveza lo mphumela kalula. Ukhakhayi lwe Homo erectus ekugcineni inezici ezintathu ezihlukile. Esokuqala yithambo eliqondile le-supraorbital, yize lingenawo umumo otholakala eGrisi naseFrance. Ngakolunye uhlangothi, anokhalo olugobekile ogebhezini, oluvame kakhulu kubantu base-Asiya. Lezi futhi yilezo ezinama-overhangs aminyene kakhulu we-occipital.
Omunye wemibuzo esalindile ku Homo erectus ekugcineni kungukuthi ngabe usebenzise ulimi olukhulunywayo ngesikhathi esaphila. Umbono owodwa ngalezi zinhlobo uphakamisa ukuthi bangabantu bokuqala bokuwusebenzisa emphakathini abawudalile.
Kunzima ukwazi ukuthi ngabe le mbono ilungile ngokutadisha izinsalela. Uma i-biology ibonakala ilisekela leli qiniso, ngoba inezakhiwo zobuchopho nezomlomo zokwenza lokhu.
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe nguDaniel Everett, umphathi weKolishi Lobuciko neSayensi eBentley University eMassachusetts, ukuqinisekisile lokhu. Ngokuya ngokutholakele kwabo, igama lokuqala elashiwo ngabantu bakudala lashiwo ngamalungu e-l Homo erectus.
Ukudla kungenye yezinto ezithakazelisa kakhulu ocwaningweni lwe I-Homo erectus. Ngokuqondile, ngemuva kokuthola ukuthi ungabhekana kanjani nezinguquko ezenzeke ngemuva komlilo. Ekuqaleni kwakuyisilwane esidla omnyama, ukuthola inyama kwakusebenzisa izinsalela zezidumbu zezilwane. Yini enye, Ubuye aqoqe imifino notshani, afune ukudla okuphelele ngangokunokwenzeka.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge Homo erectus ekugcineni kanye nezici zabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Homo erectus ekugcineni